Ohatrinona ny fatin'ny vatan'ny mpitaingina bisikileta? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Tavy amin'ny bisikileta - mamaly ireo fanontaniana
Tavy amin'ny bisikileta - mamaly ireo fanontaniana
Ohatrinona ny fatin'ny vatan'ny mpitaingina bisikileta?
Fiaretana ambonyhazakazaka am-bisikiletadia hianjera amin'ny toerana 4% sy 15%. Lehilahy ambony salama mahazatratavy amin'ny vatanaisan-jato dia hatramin'ny 20%.
Ny Diet dia zava-dehibe tokoa amin'ny bisikileta matihanina ka tsy azo hamaivanina. Ary izany no mahatonga ny ekipan'ny World Tour hampiasa vola be amin'ny sakafo mahavelona. Hanana chef iray farafahakeliny miaraka amin'ny ekipa ianao rehetra, fara fahakeliny, mpahay sakafo iray.
Mazava tsara ny ataon'ny chef, fa ahoana kosa ny mpahay sakafo? Ho hitako izany amin'ny alàlan'ny fisandohana ho mpitaingina bisikileta matihanina indray ary manontany an'i Nigel Mitchell, izay ekipan'ny Nutritionistat Team EF Education First ary naman'ny GCN ihany koa nanoratra ny bokinay, The Cyclist-based Plant. Door creak) (Heavy Bass) (whoosh) Mieritreritra aho fa mbola tsy natahotra ny handeha ho any amin'ny studio GCN mihitsy aho. Tsara ve Nigel? - Hiya Si, henoko izany.
Tsy tokony hatahotra mihitsy ianao, tokony ho fantatrao fa efa ela no nahafantaranao ahy.- Marina izany, marina izany. Fa na izany aza tsy mandainga velively ny mizana ary mieritreritra aho fa izany dia ho ampahany amin'izany.- Saingy mahaliana fa lazainao fa satria ny atletanao dia ny atleta amin'ny lanja no ifantohanao? - Ie. - Na dia mifantoka be loatra amin'ny sakafo mahavelona aza aho.
Ny fifantohako dia ny fahasalamanao sy ny fahombiazanao amin'ny ankapobeny, ary ny lanjany dia ampahany kely fotsiny amin'izany. - Marina, mahaliana izany satria io no fanontaniako voalohany. Inona no ataon'ny mpahay sakafo iray ho an'ny ekipa World Tour? - Eny, izany no fanontaniana tadiavin'ny olona maro valiny. (mihomehy) Tsia, matotra tokoa, tena mandreraka sy miasa lalina izy io ary miasa amin'ny ambaratonga maro samihafa.
Ka misy ambaratonga stratejika izay ezahantsika hampiorina kolontsaina tsara manodidina ny sakafo sy ny sakafo ary ny fahasalamana ary ny fahombiazana. Ary ao anatin'izany ny fiaraha-miasa amin'ny mpahandro, miasa amin'ny hotely, amin'ireo soigneurs, ary miara-miasa amin'ireo mpiara-miasa amin'ny sakafo ao amin'ny ekipa. Ary ny inoako dia, raha manana tontolo iainana mety sy karazana kolontsaina mety ianao, dia mianatra avy amin'izany traikefa izany ireo mpamily ary misy fiatraikany lehibe amin'ny fihinanana sy ny fitondran-tenany izany.
Ary ampahany amin'ny asako ny fananako fivoriana foana amin'ireo mpamily, indrindra any amin'ireo toby fiofanana, ary rehefa misy mpamily vaovao miditra amin'ny ekipa dia manao fampahafantarana kely amin'izy ireo aho, izay mazàna dia eo anelanelan'ny adiny roa sy roa, ka lalina dia lalina izany. - Ie! - Ary ny zavatra hataoko any dia tena manandrana sy mahatakatra, manana tsy fahazakana sakafo ve ianao? manana preferences ve ianao? manana olana ara-pitsaboana momba ny sakafo ve ianao? Ahoana ny tsy fahampiana vy, ny tsy fahampian'ny vitamina? D, zavatra toa izany, mba ahafahantsika mijery ny sasany amin'ireo rà ara-tantara, izay ananan'izy ireo ao ary ahoana no fomba anaovan'ny sakafo sy ny sakafo azy io. Manana olana amin'ny sakafo sasany ve ianao? Miresaka amin'izy ireo momba ny filozofia ao amin'ny ekipa ve ianao? izahay miaraka amin'ny sakafo.
Hiresaka momba ny mahavariana ny chef an'ny ekipa sy ny fomba tokony hifandraisany amin'ity chef ity aho momba ny sakafo atolotray amin'ny hazakaza-tsika raha ny fahitan'ny vatana azy tsara - Okay. Noho izany, tokony handroso ve isika ary avy eo hijery ny fitambaran'ny vatana? - Tsara, mahaliana, Si, ny nataoko, nongotako ny taratasiko taminao tamin'ny 2005 fony ianao bisikileta an-tendrombohitra. Ka manana angon-drakitra ara-tantara vitsivitsy isika ka tena afaka mahita ny fiovanao tato anatin'ny 15 taona lasa - eny, ka anio dia tsy ho hitantsika fotsiny izay ataon'ny mpitsabo ara-sakafo mpandehandeha eran-tany, fa anio kosa isika hahita Ahoana no ahatongavako ao amin'ilay 15 taona farany nihena.- Ka tsy maintsy midina any amin'ny pataloha ianao.- Androany vintana izany, sa tsy izany? (mihomehy) (mivoaka ny lakolosy) Eny, mahaliana toy ny namaky ny fanehoan-kevitra, raha nipetraka teo amin'ny patalohako aho dia nahita pataloha fanaovana spaoro roa heveriko fa mety ho tamin'ny 2005 i Nigel - Ie, izaho mieritreritra ianao dia afaka mijery ny lamaody.
Ny zavatra hafa dia hoe tsy dia fantatro loatra ianao raha tsy misy ny hoodie GCN anao, manana t-shirt ianao - manana aho, misy koa io GCN voasoratra eo io, inoako fa tsy maintsy esoriko io, sa tsy izany? - Eny, amin'ny ankapobeny, inona no ataontsika? Ity, haka fepetra amin'ny vatanao aho, ary handrefy teboka valo amin'ny vatanao izahay ary ny zavatra ataontsika dia, mijery fotsiny ny totaliny izahay, tsy miasa fitoviana amin'ny tavy amin'ny vatana. na zavatra toa izany, na dia zatra manao an'izany aza ny olona matetika. Tsy tiako ny mampiasa azy satria mila mampiasa fampitahana famerenana sasany ianao ary raha tsy mampiasa fampitoviana mitovy dia mahazo isa samihafa tanteraka.
Ary mbola betsaka ny tanjona dia ny hoe rehefa manana ny totaliny fotsiny isika dia tsy milaza hoe tsara na ratsy ity, milaza izahay fa marina eto. Ary ny zavatra ataontsika rehefa mandeha ny fotoana dia afaka manara-maso izany isika, ka, fantatrareo, azontsika atao ny mijery ny toerana misy ny atleta amin'ny dingana samihafa amin'ny vanim-potoana. Indraindray isika dia miasa amin'ny tanjona ho an'ny olona mila lanja iray.
Saingy ny fiarovana ny mpitaingina azy fotsiny dia ny fahatratrarana ny tanjon'ny zava-bita satria mora tokoa ny maka lanja lavitra loatra, ary raha mavesatra loatra ny lanjantsika dia manana olana ara-pahasalamana sy fahombiazana amin'ny mpamily tokana isika. - Ka raha te-hanomboka isika, dia esory ny t-shirt anao ary miarena. - Tsara. Woohoo! (Sisioka Wolf) - Eny, izany aloha, tsy maintsy milanja anao izahay - Eny - Noho izany mijoroa amin'ny mizana - Wow! - 72.1.- Eny! - Eny, mahaliana fa tamin'ny 8 Aogositra 2005 70.9 ianao.- Mety ho ny bisikiletako io, hoy aho, izay nitombo nanomboka teo. (mihomehy) Azoko atao ny manelingelina na inona na inona, Nigel, saingy mieritreritra aho fa tsy ho voafitaka ianao. - Tsia, mila anao miala sasatra aho.
Ka ny hataontsika eto fotsiny dia ny fampiasako azy ity kalipera hoditr'olom-bolo ity, noho izany dia fitaovana enjenieran'ny siantifika izay manana habe amin'ny volom-borona izay mametraka tsindry iray amin'ny hoditra. Ary ny ataontsika dia refesina fotsiny amin'ny milimetatra, asehoy be dia be ny hoditra sy ny sela ao anatiny izay tsy miovaova, ny hatevin'ny hoditra dia mijanona ho tsy miovaova, ireo zavatra eto ambany no miova ary ireo zavatra eo ambaniny, izay maneho ny vatana tavy Ary toy ny nolazaiko teo aloha, tsy hampiasa an'ity aho raha hanombatombana ny haben'ny tavy anaovan'ny olona iray satria tsy dia mety loatra izany, fa ny mahasoa azy dia ny manampy antsika hanao sarintany ny fanovana lanjan'ireo atleta hahafahantsika mahazo iray mahazo hevitra tsara hoe very hozatra ve isika? very tavy ve isika? ary ny fandrefesantsika izany rehefa mandeha ny fotoana mba hiarovana antsika ilay mitaingina.
Ary nofanina aho hametaka ny hoditra ao ambanin'ny fikambanana antsoina hoe ISAK ary rehefa mandinika ny hoditra miketrona ny olona dia tena mila manontany tena ny amin'ny fianaran'ny olona izy ireo. Ny fomba anaovako izany aminao dia tsy ny fomba fanaony ao amin'ny boky torolàlana ISAK ary izany dia tena natao ho an'ny fohy fotsiny.- Okay.- Fa ny zavatra voalohany ataoko dia ny mijery anao aho ara-pahitana, ary manana fahatsiarovana sary ho an'ny vatan-dehilahy aho - oh mahasoa izany. (mihomehy) - Ka tsy dia tena hafa mihitsy ny fahitanao azy, tamin'ny 2005, mba ho marin-toetra Si - Phew! - Eny, raha mijery anao fotsiny aho any, dia hitako fa nanomboka nijery an'ity tovolahy antonony ity ianao, miparitaka kely any aoriana, manodidina ny voa any. (mihomehy) - Marina, okay. - Tsy zava-mampientanentana loatra, tsy misy zavatra manaitra loatra, ka dia efa foana aho --- henonao eto ho mpijery GCN voalohany.
Ny zavatra momba ny taona dia mahaliana, Nigel, fantatrao, mpamily toa an'i Valverde, fantatrao, teo amin'ny faha-efapolo taonany, - Eny.- Fantatrao fa hiady izy, ary fantatro fa tsy afaka miresaka antsipiriany isika, fa miady amin'ny fiparitahan'ny taona antonony izy? Atleta ambony? - Lazaiko aminao, izay hitako fa tena mahaliana, tsy voatery hieritreritra aho hoe sarotra lavitra noho izany satria niara-niasa tamin'ny olona efa-polo taona, dimampolo aho ary tena mahia. Heveriko fa ny tsy fitoviana - marina. - Ka, heveriko fa raha nanohana ny tenany toa an'i Valverde ny olona dia mety hihasarotra kokoa ho azy isan-taona izany, na mila manamboatra isan-taona izy, saingy tsy navelany handeha irery izany, nahazo 10 pounds, avy eo niezaka izy ahitsio izay.
Ka notanterahiny nandritra ny fotoana manontolo. Noho izany, heveriko fa mety ho fanamby izany, saingy mieritreritra aho fa raha mijanona toy izany ny olona dia ho mora kokoa ny manandrana sy miady indray. Ka ny zavatra ataontsika foana dia ny fandrefesana ny lafiny ankavanana toy izao, izany no lafiny maivana horefesintsika - Eny ary - ary ny iray amin'ireo zavatra izay tena mahaliana an'ireo mpitaingina bisikileta dia rehefa miasa eo anilantsika isika, matetika, rehefa nianjera izy ireo, manana tavy maratra marobe izy ireo, ary izany no antony tsy maintsy andramantsika matetika ny handrefesana ny manodidina an'io vongan-java-manitra io satria tena manampy kely izany dia jereko ny fiparitahan'ny vatanao, fa hitako koa raha ianao somary mangozohozo kely satria raha somary mangovitra ianao dia firy ny mpamily ao dia hoy aho azafady mba alao antoka fa mandeha ianao ary zahao ny chiro.
Miasa miaraka amina ekipa izahay. Ary mitady ny teboka afovoany eo amin'ny sandrinao fotsiny aho, avy eo maka boribory isika ary avy eo maka ireo fandrefesana ireo. - Okay. - Ka avelao aho hitondra ity fandrefesana ity any.
Fikajiana ara-tsaina haingana. Eny ary, nomarihinay ny sandrinao, ka izao dia haka ny hoditry ny hoditra fotsiny aho, ny zavatra ataoko dia maka refy telo samihafa aho ary amin'ny salanisa fotsiny. Ary averiko indray, amin'ny fehezan-dalàna faran'izay henjana dia manoratra isaky ny fandrefesana isan-karazany aho, fa mandritra ny fotoana voafetra dia horaisiko fotsiny ity iray ity ary refesiko.
Ka ny ataoko eto dia esory fotsiny ny hena eny an-tananao, avelao ny caliper, avelao izy hipetraka, esory, ataovy indray ilay zavatra mitovy, ataovy indray ilay zavatra mitovy, tsara izany. (Mozika miala sasatra) Azonao atao ny mamerina ny t-shirt anao mba ho mafana foana - afaka miaina sempotra ianao rehetra. (mihomehy) - Avy eo dia hataonay ny tongotrao, ka ny sisa ataonao dia ny mipetraka eo amin'ny seza eo.
Ankehitriny, 15 taona lasa izay, tsy nanao izany ianao. Tsy manana tongotra volo ianao, sa tsy izany? - Tsia, marina izany. Telo volana lasa izay dia tsy nanana tongotra lava volo toa izany aho, nefa zavatra ririnina - zavatra ririnina, sa tsy izany? Ka ny ataoko eto dia mandeha fotsiny avy eo amin'ny valahana ka hatrany an-tampon'ny lohalika ary mandehana mankany amin'ny teboka afovoany eo.
Ary omena antsika fotsiny izany, raha ampitombointsika ny fehin-kibo, raha misy mampitombo ny fehikibo ary mihena ny valin'ny hoditra, manome soso-kevitra izany satria manangana hozatra bebe kokoa amin'ny feny izy ireo - Eny.- Rehefa miakatra ny valin'ny hoditra ary mihalalaka ny tongotra, Midika izany fa mitafy tavy bebe kokoa izy ireo ary mamoy hozatra, izay tsy izay no tadiavintsika. - tsia.
Ka ireto karazana fandrefesana ireto dia mety hanampy betsaka amin'ny mpamily satria manampy antsika hahatakatra ny sasany amin'ireo fanovana ireo ihany izany. - Ie, azoko an-tsaina fa marika mariky ny fahombiazan'ny fiofanana io, raha ny marina? - Ie, eny. Ny tiako holazaina dia betsaka ny mpamily no liana raha toa ny fampiasantsika an'io dia tena liana amin'ny fanangonana azy ireo tsy tapaka izy ireo mba hahafahan'izy ireo manara-maso sy mahita hoe aiza no misy azy ireo amin'ny dingana samihafa ka rehefa mpamily aho dia Niara-niasa nandritra ny taona maro izay niverina aho nanao hoe, 'Ooh, taiza aho i May Nige farany teo?' 'Ooh, oh yeah, avy eo tena lasa aho (volo). 'Na' Oh eny, tena tadiaviko - 'Ary noho izany dia ampiasain'izy ireo ho toy ny ampahan'ny matrix miaraka aminy - Ka, azonao atao ve izany amin'ny hazakazaka iray avy eo? - Ie, marina tokoa! Ka ny hazakazaka dia mety ho toerana tsara hanangonana ny sasany amin'ireo angon-drakitra ireo, fa ny tena zava-dehibe amin'izany dia ny tsy tena ataontsika, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, amin'ny fomba voafaritra, amin'ny fomba hafa
Tsara ny antsika, eto izany. Tsy milaza izahay fa tsara izany, ratsy izany, fahombiazana na tsy fahombiazana, fa fitaovana fanaraha-maso fotsiny no ampiasainay azy. Saingy hitako ho tena miaro ihany koa ny fisorohana ny mpamily tsy ho maivana loatra sy manify loatra - - Eny - Ary toy ny amin'ny Grand Tour, dia mazàna mandrefy izany isika amin'ny voalohany, eo afovoany, amin'ny farany.
Averina indray fa tena manampy antsika hahatakatra ny fifandanjan'ny angovo izany, ka ataon'ireo mpitaingina antoka fa mahazo kaloria betsaka ao aminy isika. Izaho dia teo amin'ny hazakazaka izay nanjavonan'ireo mpitaingina haingana loatra ka afaka niditra an-tsehatra izahay mba hanampy azy ireo sy hanome sakafo azy ireo bebe kokoa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ka, hainao, fa momba ny fanohanana daholo fa tsy amin'ny fitsarana. - Ie.
Manana inkling aho fa lasa nidina ny hoditra ary nihena ny hozatra. Fa ho liana tsara aho. Tsara izany, Nigel, ahoana no fahitantsika azy? - Eny, inona no dikan'izany rehetra izany? Tahaka ny efa nolazaiko teo ihany, tsy milaza aho raha tsara na ratsy ny raharaha, dia amin'ny fotoana ihaonana fotsiny isika izao.
Liana amin'izay azonay atao izahay, ampitahao amin'ny angona azonao efa 15 taona lasa izay. ary mahaliana fa tsy misy fiovana lehibe, lanjan-kilao fotsiny ianao, fa inona no dikan'ny vatanao? Ka amin'ny lafiny sasany dia ao anatin'ny lesoka fandrefesana izy ireo, ny girth, fa ny tena mahaliana dia ny fiakaran'ny hoditr'ondry efa somary miharihary. Tamin'ny 2005 dia 36 milimetatra ny fitambaran'ny olona fito, ary 53,4 milimetatra izao. - Okay. - Ka inona no dikan'izany? - Antenaina fa tsy hoe 80 isan-jato matevina noho izaho (mihomehy) - Toy ny nolazaiko hoe, tsy manao isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana aho.
Fa ny dikan'izany dia satria mitovy ny lanjany, mitovy ihany ny tadiny, saingy somary avo kokoa ny valin'ny hoditra avy eo izay tena midika hoe inona no nataonao dia very ny hozatra sy ny tavy matavy Ary Raha mijery ny ambaratonga azonao eto aho, ao anatin'ny ekipa iray dia mety hahita mpitaingina roa na telo amin'ny volana desambra izay manana hoditr'omby mitovy amin'ny volana desambra izao, ary rehefa tafiditra amin'ny vanim-potoanan'ny hazakazaka izy ireo dia hitovy amin'ny anao. Ka raha ny marina, raha mijery ny fotoana ianao izao, dia manao izany amin'ny ririnina, ary nanao azy io tamin'ny fahavaratra, dia mety niverina nidina 36 milimetatra ireo tamin'ny fahavaratra. - Eny ary, enim-bolana monja aho miala amin'ny endrika tampony .- Fa raha ny tena marina kosa, fantatrao, tsy miresaka momba ny toerana misy azy ireo izao isika, fa zavatra ratsy amin'ny fahasalamanao io, na ho an'ny iza no karazana fiara, ianao dia hanisy fiatraikany ratsy amin'ny familianao.
Ao amin'ny faritra mety ianao. - Eny, mahafinaritra izany raha ny fijerinao manokana, mazava ho azy, fa ny tena mahaliana ahy dia tsy hitsara mpamily ianao rehefa niditra izy ireo, raha ny: Eny, mila mandamina anao izahay izao satria ny hoditrao avo kokoa noho ny anjaranao rehetra ny vala - Tsia, ny fitsarana toy izao dia mety hampidi-doza ary tena miezaka aho ny hitazona ireo mpamily tsy hampitaha ny tenany amin'ny mpamily hafa.
Ary tsy dia tiako ny manao fitsarana marina raha tsy efa manana daty voafaritra izahay ary afaka mahita ny fomba nataon'ny mpanao fanatanjahantena. Raha manana mpamily tonga amin'ny volana Desambra isika ary tena manana hoditr'ondry avo dia hilaza izahay fa hanao ny marina aminy tanteraka isika ary hiteny hoe, jereo, fantatrao, mandritra ny taona, aiza no hipetrahan'ny mahazatra, manao ahoana ianao amin'ny vanim-potoana? dia mandeha matetika izy ireo, eny, kilao vitsivitsy aho amin'izay tokony hisy ary okay, andao hanampy anao amin'izany, ka rehefa hihaona indray isika amin'ny volana janoary dia zavatra tokony hirosoana io. indray, dingana manohana izy, raha tokony ho fantatrao fa tena matavy loatra ianao, mandehana mandamina ny tenanao - ny sasany amin'ireto fomba ireto hahazoana olona very lanja kely azoko eritreretina eo ambany fanaraha-maso akaiky dia mahomby tokoa, ary rehefa dinihina tokoa, lanja dia tena zava-dehibe ho an'ny bisikileta matihanina.
Fa na ny mpamily aza dia ho irery mandritra ny tapany lehibe amin'ny taona ary hikarakara ny tenany. Azoko an-tsaina koa fa mora be ny tsy manao fahadisoana fotsiny, fa koa ny manao fahadisoana matetika. Ka anjaranao ve ny mitandrina ny sakafonao amin'io fomba fijery io koa? - Ie - Ohatra, ny tsy fihinanan-kanina? - Ie, ka raha mijery bisikileta isika fa tsy bisikileta fotsiny, fantatrao fa efa nanana traikefa tamin'ny fanatanjahan-tena be dia be aho, ary ny tsy fihinanan-kanina dia mahazatra amin'ny ankamaroan'ny fanatanjahantena.
Ny fomba fiasa sy ny eritreritro dia mifandraika amin'ny tsy fihinanan-kanina. Ka raha mieritreritra izany ianao dia tsy normal daholo izay angatahinay amin'ny atleta, ka fantatrao rehefa manao zavatra toy ny fanazaran-tena haingana kokoa ny olona, ​​sa tsy izany? Ny fahaverezan'ny angovo tena voafetra ho an'ny dia lavitra dia tsy mahazatra loatra, ka misy zavatra tsy mety ao. Saingy tsy midika izany fa pathological izy, ary ny tiako holazaina amin'izany dia, raha avy amin'ny fomba fijery ara-pihetseham-po na ara-batana dia ratsy ho an'ny atleta izany.
Ka raha mampiditra fiovan'ny sakafo sy ny fampiofanana isika hanampiana azy ireo hanatsara ny fahombiazany, dia tsy voatery ho salama izany tarehin-javatra tsy mifanaraka amin'ny fahasalamana izany ary mahatonga ireo lamina tsy mitombina ireo tsy misy lojika tena izy avy amin'ny fampisehoana na fomba fijery ara-batana dia raha manomboka miditra isika faritra mampidi-doza, avy eo rehefa miditra amin'ny tsy fihinanan-kanina ny olona dia misoroka tsy hahatonga azy ireo tsy hihinan-kanina ny tsy fihinanan-kanina. (Kitapo varavarana) - Eny, tsy maintsy milaza fisaorana lehibe ho an'i Nigel aho, noho ny nanaovany azy ho mora ho ahy, azoko antoka fa nandainga momba ny hoditro izy, saingy tsy mila fantarintsika izany, fa koa ho an'ny fahitany mahatalanjona sy ny fahalalany tahaka ny nitifirinay azy niaraka, mifototra amin'ny boky Cyclist miorina amin'ny zavamaniry. Raha te hahita iray ianao dia azonao atao ny manindry ny écran izao, raha tsy izany dia mba omeo ankihibe kely ity lahatsoratra ity.
Ny bisikileta ve dia mampihena ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana?
Mora ny manangana tsy ilainamatavyeo amin'ny andilana, fa mandeha bisikiletaafakamanampy anao hanova ireo kilao fanampiny ireo ary eny an-dàlanavery tavy kibo, manampy anao ho tonga matanjaka sy mahia.2 Jan 2020
Mandritra izany fotoana izany, fiaretanampitaingina bisikiletyhandoro tavy be dia be. Ny sisa tavela dia ny hozatra. Ka izy ireomahia, fa atletisma. Ny vatan'ny ambony dia matetika tsy dia mandroso noho ny vatana ambany koa.
Inona no lanja mety ho an'ny bisikileta?
Fitsipika ny fampitoviana ankihibe raha metylanjadia mandray 100 pounds ho an'ny halavany 5 voalohany (ho an'ny vehivavy) ary 106 pounds (ho an'ny lehilahy). Avy eo, ampio 4-6 pounds isaky ny santimetatra ny haavony ambonin'ity fotony ity (vehivavy), ary 5-7 kilao isaky ny santimetatra (lehilahy).5 Sep 2016
Na azonao atao koa ny miantso azy ireo malala-tanana izay mbola matanjaka be amin'ny bisikileta. Tena mahasosotra izany izao satria manana salady ho an'ny sakafo hariva ianao, sakafom-pisakafoanana amin'ny seleria ary kafe kely mainty. Ahoana no anaovany an'izany? Tsara, tadidio fa ny lanjanao amin'ny bisikileta dia vato misakana ihany rehefa mandeha miakatra na mihazakazaka ianao.
Ka raha mihazakazaka milanja eo amin'ny fisaka ianao dia tsy maninona na milanja be aza ianao. Ny zava-dehibe dia ny herinao tanteraka. Na dia manomboka miakatra ambony aza ny arabe ary manohitra azy ny lanjanao dia tadidio fa tsy ny hery misintona ihany no h. Mbola mila mandresy ny fanoherana mihazakazaka sy ny fitarihana aerodynamika ianao.
Ka raha miakatra dimy isan-jato ianao ary mihodina amin'ny 20-30km isan'ora, midira lalina, mahazoa aerodynamika ary mipetraha amin'ny familiana dia tena hanampy tokoa. Mazava ho azy, fa haingana kokoa ianao no mandeha, ny fitarihana aerodynamika manan-danja kokoa no zava-dehibe kokoa. Ka amin'ny fiakarana mihantona dia hihazona anao kokoa ny lanjanao.
Arakaraky ny fiakarana ny fiakarana no manisa ny herin'ny herinaratra. Noho izany ao Angeroo aho dia tena naniry ny hanana fifehezana kely kokoa amin'ny fihinanana sôkôla. (mozika malefaka) Ny zavatra miakatra matetika dia midina koa.
Ny mpitaingina mavesatra dia manana tombony lehibe amin'ny fidinana haingana. (mozika malefaka) Zavatra iray hafa tsy tokony ho adino raha resaka fanipazana olona amin'ny bisikileta na rehefa eo am-pandraisana ny ped ianao, dia tena mahalana ny momba ny tahan'ny ftp-to-weight anao, raha tsy hoe mitaingina fiara ianao fiakarana lava sy maharitra. Ny zava-dehibe dia ny fomba ahafahanao manafika na manafina ny fanafihana, ary ireo dia hery fohy faran'izay fohy.
Ireo mpitaingina bisikileta tsara indrindra dia tsy ireo manana hery mitaky lanjany fotsiny. Izy ireo no afaka manery ny booth mafy anao, izay tena sarotra tokoa ny refesina amin'ny laboratoara, ary manome anao isa. Amin'ny ankapobeny, raha mijaly kokoa ianao ary afaka mihazona ity bisikileta ity, dia afaka manao zavatra tsara kokoa noho ny olona iray manana tahan'ny hery sy lanjany tsara kokoa noho ianao ianao.
Mahia ve ny bisikileta?
Ireo mpitondra bisikileta matotra matetika dia manana tavy ambany amin'ny vatana. Làlanamitaingina bisikiletadia fampihetseham-batana maharitra, mafy, maharitra. Io karazana fanatanjahan-tena io dia mandoro tavy be dia be amin'ny vatana. Ka mahita ireo mihazakazaka lavitra sy lalana ianaobisikiletatena izanymahia.
Tsara ve ny FTP 200?
amin'ny ftpamin'ny watts ho an'ny vehivavy
Tsy dia misy vahaolana noho ity angona ity satria misy lehilahy betsaka kokoa noho ny vehivavy mampiasa Cycling Analytics. 46% ny olona no manana anamin'ny ftpambany200W. 44% ny olona no manana anamin'ny ftp210W na mihoatra. 10% ny olona no manana anamin'ny ftpeo200W sy 210W.7 Jun 2018
Hanampy ahy hihena ve ny bisikileta mandritra ny 30 minitra isan'andro?
Milamina, antononybisikiletamandoro kaloria 300 eo ho eo ao anatin'ny 60minitra, fa ianaoafakamandoro bebe kokoa noho izany raha mampitombo ny hamafiny. Raha ny marina, araka ny taratasin'ny Harvard Health Letter, olona iray 155 poundsafakamandoro kaloria 298 a30-minitramitaingina bisikileta, raha mandeha an-tongotra an-tongotra 12-ka-13,9 kilaometatra isan'ora izy ireo.17 Jul 2020
Mampihena ny tavy miverina ve ny bisikileta?
Bisikiletasafidy tsara noho izanyverylanja Saingy tsy izany fotsiny noho ny kaloria entinao, fa misy fiatraikany amin'ny tahan'ny metabolika basal sy ny hozatrao koa. Rehefa manindry ianao na misintona ny pedal dia mifanena amin'ny fanoherana ianao mba hananganana hozatra.14 Mey 2020
Androany, mpanao fanatanjahantena sangany no hanaopoop ny patalohaary mitohy. Ataovy ao an-tsaina izay mitranga rehefampitaingina bisikiletydia voaterypoop ny pataloha. Ireo matihanina dia mifaninana amin'ny toe-javatra izay tsy dia voakasiky ny vatany - mahatsiaro ho faty izy io.21 Jul 2015
Anorexic ve ny bisikileta?
Mpitsabo sakafo ara-panatanjahantena no nitatitra ny fitomboan'ny isan'nympitaingina bisikiletymijaly noho ny tsy fihinanan-kanina. Renee McGregor dia nilaza fa nahita fiakarana dimy heny amin'ny isan'ny lehilahy mpitaingin-tsoavaly antsoina hoe sakafo misavoritaka tamin'ny taona lasa, raha ny mpanjifa vaovao rehetra hitany diahazakazaka am-bisikileta.2 Jan 2020
Ohatrinona ny tavy ao amin'ny bisikileta?
Ny bisikileta dia 6 tavy matavy ho an'ny lehilahy ary 12-16% tavy ho an'ny vehivavy. Ny mpihanika elite antonony dia 5 '7 ″ sy 130 pounds. Ny vatan'ny mpanao andrana andrana dia 6 metatra sy 147 lbs.
Nahoana ny bisikileta no mampihena ny fahafahanao mandoro tavy?
Ny valiny dia nanolo-kevitra ny fiovana mankany amin'ny oxidation tavy amin'ny vatana ho an'ny angovo. Ankoatr'izay dia nampitandrina ny fandinihana fa ny fihinanana tsakitsaky manan-karena amin'ny gliosida mandritra ny bisikileta na amin'ny fanatanjahan-tena hafa dia hampihena ny fahafahan'ny tenanao mandoro tavy. Hanosika ny vatanao hiala amin'ny tavy mirehitra mankany amin'ny karbônina mandoro ho an'ny angovo izany.
Iza no tsara kokoa amin'ny fandoroana tavy amin'ny fihazakazahana kibo na bisikileta?
Raha salama ara-batana ianao dia tsy handoro kaloria firy ny vatanao satria mahomby amin'ny fampiasana angovo ny vatanao. Ny hazakazaka sy ny bisikileta dia afaka manampy amin'ny fandoroana tavy amin'ny vatana. Na izany aza, tsy bala majika akory izy ireo hanalefaka ny tavy amin'ny kibonao rehetra ary haneho ny vavoninanao.